About Us - Li Pu Energy Kuchengetedza kuputira Material Co., Ltd.
XPS Extruded bhodhi
EPS Polystyrene bhodhi
Rock shinda bhodhi
Thermal kuputira Accessories
Extruded bhodhi kuvaka michina
Polystyrene bhodhi kuvaka michina
Rock shinda bhodhi kuvaka michina
We akasimbisa humanized design, anokanda pa kupa yepamusoro uye humanized chigadzirwa.
Lipu kuputira zvinhu co., LTD. iri Linyi guta, Shandong dunhu, iro rinozivikanwa so "logistics guru China", iri munzvimbo yepamusorosoro maindasitiri paka pamwe yakakunakira zvifambiso uye mukuru ezvinhu. Ko China yokutanga yepamusoro nyanzvi mubasa kugadzirwa uye rokutengesa ose XPS extrusion bhodhi uye zvimwewo rusvingo kuputira zvinhu nemamwe mabhizimisi. Products vari zvinowanzoshandiswa kuvaka zvokunze masvingo, vehurumende engineering, kutonhora kuchengetwa, denga, uriri, ivhu, sirin'i nezvimwe minda kupisa kuputira, ndiwo chizvarwa chitsva akanaka kuvaka zvakasvibirira zvokuvakisa.
Takaita dzakasaina kuzvipira tsamba ushumiri kudzivirira zvakatikomberedza kuti danho kubuda HCFC nokushandisa murazvo retardant polystyrene uye CO2 (panzvimbo HCFC) muna XPS furo kugadzirwa, iyo inoita basa rinokosha mune zvekuvaka Utilisation, simba kuchengetedza uye kudzivirira zvakatikomberedza.
The kambani yakabudirira vakawana iso9001: 2008, uye advertising unotevera GB / t10801.2-2002 mureza, kuona yakatsiga unhu kuzvidzora. Uyezve, isu kusimbisa humanized design, anokanda pa kupa yepamusoro uye humanized chigadzirwa. Strict unhu kudzora kuzvipira kwedu kuna vatengi. Ose batch mangé mishonga iri zvachose yokuongororwa pamberi pakukurukura.
Lipu kuputira zvinhu co., LTD. Kubvira pahwakagadzwa, maererano nheyo "yakanaka kutenda vimbiso", akakunda rutsigiro shamwari siyana oupenyu uye kuzivikanwa, asi zvizivikanwe boka kuburikidza quality, vanoshandisa musika pamwe zvizivikanwe, nenyika, kuti rikurumidze upgrading zvibereko quality, kuvandudza chigadzirwa Michina zviri zvinhu pamusoro simba compressive, kumbogadzirwa kuti mudziye, kuramba mvura mhute permeability nezvibereko hombe, simba rokuponesa nezvinozoitika pachena, pakuvaka indasitiri ndiyo nzvimbo simba kuchengetedza uye zvakatipoteredza kuchengetedzwa zvinhu.
Kuburikidza yedu unremitting kuita, isu kupa vatengi pamwe yepamusoro simba okuponesa zvinhu uye vakarongeka uye inoshanda mabasa kusimudzira yose simba rokuponesa indasitiri!
Lipu kuputira zvinhu co., LTD. Pachokwadi kugamuchira zvitsva nezvitsaru vatengi vanoshanyira, kutungamirira uye pamwe, uye anorenda nokusika ramangwana riri nani ...
Hafu-nzira Industrial Park, Lanshan District, Linyi, Shandong Province, China
Copyright Linyi lipu kuputira zvinhu Co., Ltd.